Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - ကလေးငယ်များအား ရိုက်နှက်ညှင်းပန်းပြီး
Board index ‹ တို့ချစ်တဲ့ မြန်မာက တို့ချစ်တဲ့ခလေးတွေ...
တို့ချစ်တဲ့ မြန်မာက တို့ချစ်တဲ့ခလေးတွေ...
We can't go on pretending day by day.
We are the ones to makeabrighter day, so let's start giving.We make better days, just you and me.
by acmv » Wed Apr 23, 2014 6:03 pm
ကလေးငယ်များအား ရိုက်နှက်ညှင်းပန်းပြီး ပိုက်ဆံတောင်းခိုင်း နေပုံပါ..
ကလေးငယ်လေး အရွယ်ဟာ၃နှစ် အရွယ်လေးတွေပါ..
အမှတ် ၈ ရဲစခန်းပိုင်နယ်မြေမှာပါ
Aunt Aung // နိုင်ငံတော်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များ __________________________________________________________________________အလွမ်း ချစ် သူ က လေးအလုပ် သမား ပွဲစား တွေ လဲ ရှိ သေးတယ်။ ဒင်းတို့က ကားတစ်စီးနဲ့
က လေး တွေကို တင် ခေါ်ပြီး လ္ဘက် ရည် ဆိုင် တွေမှာ အလုပ် လုပ် ဖို့
လိုက် ပို့ ပေးတာ။ ဆိုင် ရှင် က က လေး တွေကို အ ကြောင်း တစ်မျိုးမျိုးနဲ့
သ ဘောမကျ ရင် သူတို့က ဆိုင် ရှင် ရှေ့  တင် ဆိုင် ရှင် ကျေနပ် အောင်
က လေးကို ရိုက် နှက်ပြတယ်။ မိဘ တွေက ဆင်းရဲ တော့ က လေး တွေ
လုပ်အားကို မီခိုစား နေ ရတဲ့အတွက် က လေး တွေကို ဒီလို အလုပ်သမားပွဲစား တွေ
လက်ထဲ အပ် ထား ပုံရပါတယ်။ က လေး တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း ပြီး
လုပ် အား ခေါင်းပုံဖြတ် နေတဲ့ သူတို့က တော့ ရွှေလက် ကောက် တံတောင် လောက်
ဝတ်ပြီး ကားတစ်စီးနဲ့ က လေး တွေ တင် ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့  ထဲမှာ တရားဝင်
သွားလာ နေကြတာ အံ့သြစရာပါ။ ဒါလဲ လူကုန်ကူးမှု တစ်မျိုးပါ။ အခု ခေတ်
လူကုန်ကူးတဲ့စနစ်က နယ်စပ် တောင် ခရီးစရိတ်ကုန်ခံပြီး ပို့စရာမလို တော့ဘူး။
မြို့ တွင်းမှာ တင် အလုပ် ဖြစ် နေပါပြီ။ အခုလို online မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်
သိလာကြရင် တော့ နောက် ဆို သက်ဆိုင် ရာက အ ရေးယူ တော့မယ်
ထင် ပါတယ်။ ဒါ မျိုးတွေ လမ်းမှာတွေ့  ရင် ကိုယ် နဲ့ မဆိုင် သလို ကျော် မသွားကြပဲ
ဓါတ်ပုံ အ ထောက် အထားနဲ့ များများ တင် share ပေးကြပါ ____________________________________________________________________Thein Myat အပြစ်မဲ့တဲ့ခလေးလေးတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ အသုံချတာတွေကို မြင်ရတိုင်း အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် ဆင်းရဲပြီးပညာမတတ်တော့ အဆင်အခြင်မဲ့ပြီပေါ့ ဒီခလေးတွေ စာသင်ခန်းထဲရောက်အောင် ဆင်းရဲသားတွေ အလုပ်လက်မဲ့တွေကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရနိုင်အောင် အစိုးရကစီမံကိန်းချပြီးဆောင်ရွက်သင့်တယ် သယံဇာတအကြီးကြီးတွေ ခဏခဏထွက်ပေါ်နေပြီး ဆင်းရဲသားတွေ အလုပ်လက်မဲ့တွေအများကြီးရှိနေတာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ အနှိပ်စက်ခံ အနိုင်ကျင့်ခံပြီး မိသားစုနဲ့ တကွဲတပြား အလုပ်လုပ်နေရတာ အစိုးရလူကြီးမင်းများ နိုင်ငံတကာကို သွားရတဲ့အခါ မရှက်ကြဘူးလားမသိဘူး တွေကြည့်ရင်နေချင်စရာ_________________________________________________________Sabe Phyu တကယ်မြင်ဖူးတယ် ဘယ်ဖမ်းထားတဲ့ကလေးတွေလဲမသိဘူး နေ့တွက်သတ်မှတ်ချက်ရမှထမင်းကျွေးတာလို့ကြားဖူးတယ် ရန်ကုန်စကော့ဈေးနားမှာလဲအုပ်စုလိုက်ရှိနေကြတယ်____________________________________Ko Naing နောက်ကကြိုးကိုင်ပြီးခိုင်းတယ်သူကိုဖေါ်ထုတ်ပြီးထိထိမိမိအရေးယူသင့်ပါတယ်မသိနားမလည်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုအတင့်ရိုက်နက်ပြီးခိုင်းတာလက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ပါတာဝန်ရှိတယ်သူတွေကူညီကယ်တင်သင့်ပါတယ်________________________________________________Ye Yint ရဲ့တွေ့ စခန်းမှာ ပဲ့ ထိုင် စားနေရင့် တော ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မူ ရမှာမဟုတ် ဒီလို ကလေးငယ် တွေကို ခိုးယူ ပြီး ခိုင်းစားနေတဲ့ ဂိုဏ်းတွေ့ ကို ရှာဖွေ့ပြီး ဖမ်းသင့်တယ်____________________________________ ပြင်းထန်စွာ အ ရေးယူပေးပါ
Return to တို့ချစ်တဲ့ မြန်မာက တို့ချစ်တဲ့ခလေးတွေ...